रामचन्द्र पौडेलको एउटै बोली : कि छाड्नुस् कि सघाउनुस्? — SuchanaKendra.Com
रामचन्द्र पौडेलको एउटै बोली : कि छाड्नुस् कि सघाउनुस्?
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूहले पार्टीको १४ औँ महाधिवेशन आँगनमै आइपुग्दा पनि सभापतिको पदमा को उम्मेदवार बन्नेबारेमा अझैँ तय गर्न सकेको छैन ।
सोमबार पौडेल निवासमा उम्मेदवारीबारे छलफल भए पनि सहमति टुंगोमा पुग्न सकेन । आज मंगलबार सभापतिका आकांक्षी नेता प्रकाशमान सिंह निवास चाक्सीबारीमामा उम्मेदवारी को बन्ने भन्ने सन्दर्भमा बैठक जारी छ ।
बैठकमा पौडेलले साझा उम्मेदवार बनाउनका लागि कि छाड्न कि सघाउन भनेका छन् । तैपनि बैठकले ठोस निर्णय गर्न भने नसकेको बताइएको छ । जारी बैठकमा पौडेलले भने, ‘तपाईंहरु मिल्न तयार भए मिल्नुस्। र, म छोड्न तयार छु । नत्र हैन भने मलाई नै सघाउनुस् ।’
नेता पौडेलले उम्मेदवारीको टुंगोमा पुग्नुको विकल्प नभएको बताउँदै सभापतिको उम्मेवार चयन भएपछि पदाधिकारीमा को को उठ्न दुई घन्टामै सम्पन्न गरि सकिने बताएका छन् । तर, सभापतिका लागि चाँडो एक उम्मेदवार तय गर्नु पर्ने उनको भनाइ छ । बैठकमा पौडेलसहित प्रकाशमान सिंह, शेखर कोइराल र डा। शशांक कोइराला रहेका छन् ।
पौडेल समूह भित्र मिटिङमा बसिरहँदा बाहिर उक्त समूहनिकट युवा कार्यकर्ताहरुले चाँडो उम्मेदवार बन्ने सहमतिमा पुग्न भन्दै प्लेकार्डसहित प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।
बाहिर युवाहरुले ‘साझा उम्मेदवारको विकल्प छैन,’ ‘एकता मात्रै जितको आधार हो,’ ‘नेताहरु मिल्नुस् कांग्रेस जोगाउनुस्’ लगायतका नाराहरु लगाइरहेका छन् ।